बारा, पर्सा अपडेटः राहत व्यवस्थित बनाउन आवश्यक « Janata Samachar
बारा, पर्सा अपडेटः राहत व्यवस्थित बनाउन आवश्यक
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार ०९:३४
काठमाडौं । बारा र पर्सामा २७ जनाको ज्यान जानेगरी आएको हुन्डरीमा प्रभावित पीडितहरुको राहतलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएको छ । खाद्यान्न र लत्ताकपडा पूर्णरुपमा पुगेपनि वितरण व्यवस्थित नभएको राहत वितरण गर्न पुगेकाहरुले बताएका छन् । करिब ६ हजार प्रभावितलाई पुनस्र्थापना गर्न चूनौति रहेको र उनीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राहत वितरकको भनाइ रहेको छ ।
राहत वितरण गर्न पुग्नुभएका अनेरास्ववीयू र अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरुले प्रभावित क्षेत्रमा हेल्प डेक्स निर्माणगरी पीडितको पहिचान गरिरहेको बताएका छन् । अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आएका राहतहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एकहप्तासम्म त्यहीँ रहेर आफूहरु व्यवस्थापनमा लाग्ने बताउनुभएको छ ।
यता, नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमाकान्त साहले राहत व्यवस्थापनमा राज्यले खेल्नुपर्ने भुमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । वास्तविक पीडितहरुले राहत पाउन अझै सहज नभएको उहाँको भनाइ छ ।
आइतबार साँझ प्रलय गर्नेगरी आएको आँधीबेहरीले अहिलेसम्मपनि त्यहाँका जनतामा त्रास कायम रहेको छ । आफन्त गुमाउनुको पीडाका साथै सर्वस्व उजाडिएपछि त्यहाँका बासिन्दा निराश भएका हुन् । मनोविद् डा. नरेन्द्र ठगुन्नाले पीडितको स्थितिलाई पुनस्र्थापित गर्न परामर्शको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । मनमा रहेको त्रास साम्य हुन करिब तीन चार महिना लाग्ने भन्दै उहाँले त्यहाँको व्यवस्थापनका राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य टोलीसहित प्रभावित क्षेत्र बारा र पर्सा पुग्नुभएका डा. गोविन्द केसीले हाललाई स्थिति सामान्य रहेको बताउनुभएको छ । खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने र नियमित चेकजाँच गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले पीडितलाई चाँडै पुनस्र्थापित गर्न सके समस्या हल हुने बताउनुभयो ।
बारा र पर्सा